Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Magacaabista VIP ee eTurboNews » Andrew J Wood, Madaxweynaha SKAL Asia
Andrew J Wood wuxuu ku dhashay Yorkshire England, waa hudheel hore, Skalleague, iyo qoraa safar.
Andrew wuxuu leeyahay 48 sano oo soo dhawayn iyo khibrad socdaal ah.
Wax ku bartay Batley Grammar School iyo huteel ka qalin jabiyay Jaamacadda Napier, Edinburgh. Andrew waxa uu shaqadiisa ka bilaabay London, isaga oo la shaqaynayey hudheelo kala duwan.
Booqashadii ugu horeysay ee uu dibadda ku tago waxa ay ahayd Hilton International, oo ku taal Paris, ka dibna waxa uu yimid Aasiya 1991kii isaga oo ku sugan Bangkok isaga oo loo magacaabay Agaasimaha Suuqgeynta ee Hudheelka Shangri-La, ilaa haddana waxa uu ku sugnaa Thailand.
Andrew waxa kale oo uu la soo shaqeeyay kooxda Royal Garden Resort Group hadda Anantara (Madaxweyne ku xigeenka) iyo Kooxda Landmark ee Hudheelada (Madaxweyne ku xigeenka). Ugu dambayntii waxa uu ahaa Maareeyaha Guud ee Kooxda Royal Cliff ee Huteelada Pattaya iyo Hudheelka Chaophya Park ee Bangkok & Dalxiiska.
Xubin hore oo guddi ah iyo Agaasimaha Skål International (SI), Madaxweynihii hore ee Qaranka ee SI Thailand, iyo laba jeer oo hore madax ka ah Naadiga Bangkok.
Andrew hadda waa madaxweynaha gobolka Skål Asia. 2019, Andrew waxa la guddoonsiiyey abaal-marintii ugu sarreysey ee SKÅL ee kala-duwanaanta Membre D'Honneur. Waa macalin marti ah oo si joogta ah wax uga dhiga jaamacadaha kala duwan ee Aasiya.